Nhau - Chii chinonzi Metaverse？ Uye Izvo zvavanotora chimwe chinhu chitsva muhupenyu hwedu？
Chii chinonzi Metaverse？ Uye Izvo zvavanotora chimwe chinhu chitsva muhupenyu hwedu？
Munyika yepedyo, zvinhu zvinoda kuenzanisa kwakawanda uye zvinoshanda zvakanyanya zvichave nyore, zvichingoda chete kumhanyisa kodhi kupedzisa kudzidziswa, uye fungidziro yenyika ino inoenda zvinopfuura izvo, zvinotoratidzika kunge zvine zvakawanda yekugona kwenzvimbo yedu chaiyo.
Facebook, Epic Games uye mamwe makambani ari kuisa mari zvakanyanya mukugadzira metaverse, iyo kwenguva yakareba yaive izwi rinowanikwa chete mu dystopian science-fiction novels. Zvazvinoreva ndezvekuti panzvimbo pekudyidzana neshamwari dzako pamhepo sezvazviri ikozvino, unogona kusangana navo mudhijitari muchadenga maavatari edhijitari, uchishandisa chaiyo chaiyo headset kana chimwewo chishandiso
Yekutanga metaverse yakagadzirwa muna 1992 cyberpunk novel 《Snow Crash In. Mubhuku rino, protagonist Hiro Protagonist anoshandisa iyo Metaverse sekupukunyuka kubva muhupenyu hwake. Asi zvakare izere nematambudziko, anosanganisira tekinoroji kupindwa muropa, rusarura, kushungurudzwa uye mhirizhonga, izvo zvinombo pfuura nepanyika chaipo.
Rimwe bhuku - rakazotevera bhaisikopo rakatungamirwa naSteven Spielberg - iro rakakurudzira pfungwa iyi yaive Ready Player One. Bhuku ra2011 rakanyorwa naErnest Cline rakagadzwa muna2045, uko vanhu vanotizira kumutambo chaiwo sezvo nyika chaiko yapinda munyatwa. Mumutambo, iwe unofambidzana nevamwe vatambi uye unobatana navo.
Iyo 2013 yeJapan akateedzana Sword Art Online (SAO), yakavakirwa pasainzi-fungidziro mwenje yenhau yezita rimwe cheteyo naRei Kawahara, yakaenda nhanho kumberi. Yakagadzwa muna 2022, mumutambo, tekinoroji yakafambira mberi zvekuti kana vatambi vakafira mune chaiyo chaiyo nyika vaizofira muhupenyu chaihwo zvakare, zvichizounza kupindira kwehurumende. isina kuganhurirwa kune idzi tsananguro kubva kusainzi fungidziro. Zvinogona kuve zvakawandisa, kana zvishoma, sekushanduka kwenzvimbo. Sezvakatsanangurwa naZuckerberg panguva yekufona kwemwedzi wapfuura, "Inzvimbo chaiyo yaunogona kuve uripo nevanhu munzvimbo dzemadhijitari. Iwe unogona kuita zvekufunga nezve izvi seyakaumbirwa internet iyo iwe yauri mukati pane pane kungotarisa. Tinotenda kuti uyu ndiye achazova mutsivi wenharembozha. ”Zvazvinoreva ndezvekuti panzvimbo pekudyidzana neshamwari dzako pamhepo sezvazviri ikozvino, munogona kusangana mumaatatari edijitiyiti, muchishandisa mahedhifoni chaiwo kana chero imwe. mudziyo, uye pinda mukati me chero nharaunda nharaunda, ingave hofisi, cafe kana kunyange nzvimbo yemitambo.
Saka chii chinonzi metaverse?
Metaverse inyika yepanyika yakabatana nenyika yatinogara uye yakagovaniswa nevanhu vakawanda.Iine dhizaini chaiyo uye nharaunda yehupfumi, uye iwe une avatar chaiyo, angave munhu chaiye kana hunhu. nguva neshamwari.Iwe uchataurirana, semuenzaniso.
Mune ramangwana, tinogona kugara mune yakadaro meta-zvisikwa izvozvi. Inenge iri yekutaurirana metaverse, kwete furati asi 3D stereoscopic chiitiko, uko kwatinogona kunge tichinzwa mifananidzo iyi yedhijitari padhuze nepadhuze, mune imwe mhando kufamba kwenguva. Pachave nemhando dzakawanda dze metaverse, semuenzaniso, mitambo yemavhidhiyo ndeimwe yadzo, uye Fortnite inozopedzisira yashanduka kuita imwe metaverse, kana zvimwe zvinobva mairi. Unogona kufungidzira kuti World of Warcraft rimwe zuva ichashanduka kuita imwe metaverse, kuchave nevhidhiyo yemitambo vhezheni, uye kuchave nemaAR vhezheni Unogona kuisa pamagirazi edu, kana foni yako. Unogona kuona ino chaiyo nyika kumberi kwako, kwakabatidzwa zvakanaka, uye ndeyako Tichaona iri rakakwidziridzwa pamusoro peiyo nyika yepanyika, inogona kunge iri mhando yemamita ekumusoro akakwira kana iwe uchida. , uye kukweva pasi pano, asi zvirokwazvo unogona kuzviita kuti uchinje paunoda kana uchida.Saka pamusoro pekuti uwane iyo chaiyo vhezheni yeNyika Yangu, mikana yebhizinesi haina magumo. Mune maindasitiri metaverse mamiriro, imwe yeakakosha matekinoroji ndeyenharaunda yeVR yakavakirwa mukufananidza kwemuviri Unogadzira chinhu mune metaverse uye kana ukachikanda pasi chinodonha pasi nekuti chinoteerera mutemo wefizikisi. Mamiriro ezvinhu emwenje achanyatsoita sezvatinovaona, uye zvishandiso zvichafananidzwa senge zviri zvemuviri. ”
Uye panguva ino Omniverse, chishandiso chekuvaka ino chaiyo nyika, iri mune yakavhurika beta.Iiri kuyedzwa nemakambani mazana mana kutenderera pasirese. Iri kushandiswa neBMW kugadzira fekitori yedhijitari. Iri kushandiswawo neWPP, inoshambadza yakakura pasi rose, uye iri kushandiswa nevakagadziri vakuru vekufananidza.
Muchidimbu, Omniverse inogonesa vanhu vazhinji kuti vagadzirise zvirimo papuratifomu, zvichigonesa munhu wese kugadzira uye kuteedzera yakagovaniswa 3D worlds dzinoenderana nemitemo yefizikiki uye inokwana zvakanyanya nenyika chaiye, senyika chaiyo yakagadzirwa 1: 1 ne data chairo.
Chiono uye kushandiswa kweiyo Omniverse chikuva hazvingogumira pamitambo yekutamba neyekuvaraidza chete, asiwo kuvaka, mainjiniya uye kuvaka, uye kugadzira. Kuwanika kuNvidia Omniverse Enterprise Edition iko zvino kwave 'kukwikwidza' uye kunowanikwa pamapuratifomu akadai seASUS, BOXX Technologies, Dell, HP, Lenovo, Bienvenue uye Supermicro.
Kuedzwa kwekuita kwemavhiri kunenge kuchinyatsoita basaIzvi zviri pachena kuti kune akawanda matiraki ekusarudza kubva mune ino chaiyo nyika.Ku indasitiri yemavhiri, kukosha kuri nyore kwepasirose nyika kuita kuti kukura kwemavhiri-ekumhanya mavhiri nekukurumidza zvakanyanya. kuenzanisa iyo mepu data, simulation inogona kuitiswa yekuyedza Kunze kwekuwedzera kwekuita basa, zvese kuchengetedzeka uye nemitengo zvichaderedzwa zvakanyanya.
Semuenzaniso, bvunzo dzekuita vhiri dzinowanzoitwa mumafekitori ane mamwe akareruka bvunzo bvunzo, izvo zvisina kukwana kuyedza zvese zvinoitwa nemavhiri mashandiro. Iko kusanganiswa kwechokwadi kwedhijitari vanhu uye matekinoroji sekushandura anozobvumidza iwo kuenzanisa kwesimba kukanganisa kwemotokari pakumhanya kwakanyanya uye nekumisa ngura kwemavhiri kune yakanyanya mamiriro ekunze pasi peyakaenzanisirwa nharaunda kudzidziswa. Mota zhinji parizvino dziri kuyedzwa mumugwagwa. inozoshandurwawo kuita mitsara yekodhi kuti iverengerwe nekudzidziswa kumashure, uye software yakakwenenzverwa inogona kuzoshandiswa yakananga kuchokwadi.
Uye nezveramangwana, kune isu pachedu kushanduka uye kusanganisa nzvimbo chaiko uye chaiko, kwaunogona kutamba mazita akawanda kana kuzvinyudza mune imwe nzvimbo kuti uwane imwe yakasarudzika Iwe unogona kuzvidudzira seicho chaicho Nyika Yangu, kana seGTA5 isingagumi mepu simulator inoteedzera zvakasikwa.
Post nguva: Aug-13-2021